နပေူပူ ထဲက ရသေနျ့ဗူး ကိစ်စ – Shwe Naung
Shwe Thuta | December 3, 2020 | Knowledge | No Comments
ဒီ ပွဿနာက မွနျမာမှာတငျမဟုတျပါဘူး၊ ကမ်ဘာမှာလဲတျောတျော ဂယကျထသှားစတေဲ့ ပွဿနာပါ။
ကြှနျတျောတို့တှနေ့ကြေ ရသေနျ့ဗူးတှကေို နပေူထဲမှာ ထားရငျဘာဖွဈတတျလဲ?
ကြှနျတျောတို့ သောကျနတေဲ့ ရသေနျ့ဗူးတျောတျောမြားမြားက HDPE or PET နဲ့လုပျထားတဲ့ plastic ဗူးတှဖွေဈပါတယျ။ Research တှအေရ အပူခြိနျ 20’C လောကျမှာဆိုရငျတော့ အန်တရာယျဖွဈစနေိုငျတဲ့ chemical တှေ ဗူး plastic ကနေ ရထေဲကို ပြျောဝငျနိုငျမှု အခြိနျအလှနျကွာနိုငျပွီး ကနျြးမာရေး အန်တရာယျ နညျးပါးတဲ့အတှကျ safe ဖွဈတယျလို့ သတျမှတျကွပါတယျ။
ဒါပငျမဲ့ အဲ့ထကျပိုပွီး အပူခြိနျမြားတဲ့ အခွအေနမြေိုး ဥပမာ နပေူထဲ၊ နပေူထဲမှာ အခြိနျအကွာကွီး ရပျထားတဲ့ ကားထဲ၊ အပူခြိနျအရမျးမြားတဲ့ အခနျး၊ ဂိုထောငျ စတဲ့ နရောမြိုးတှမှော အခြိနျကွာကွာထားမိပွီဆိုရငျတော့ အခွအေနကေ တဈမြိုးပွောငျးလဲသှားနိုငျခွရှေိပါတယျ။ အပူခြိနျမြားလာတာနဲ့ အမြှ plastic ဗူးခှံ ပျေါက molecular bond တှကေ ပွိုကှဲနိုငျခွေ ပိုမိုမြားပွားလာပွီး မလိုလားအပျတဲ့ chemical တှကေ ဗူးထဲက အရညျထဲကို ပြျောဝငျနိုငျဖို့ ရာခိုငျးနှုနျး ပိုပိုပွီးမြားလာနိုငျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့နိုငျငံလို အပူခြိနျ 36-40’C လောကျထိ မြားတဲ့ဒသေမြိုးတှဆေို အဲ့အခကျြကို တျောတျောလေးဂရုစိုကျရမှာပါ။ နပေူထဲရပျထားတဲ့ ကားတှေ၊ လဝေငျလထှေကျနဲ့ temperature control မရှိတဲ့ container နဲ့ ဂိုထောငျတှမှောဆို အပူခြိနျက 50-60’C လောကျထိကို ရောကျသှားတတျပါတယျ။ အဲ့လိုအခွအေနတှေမှောဆိုရငျတော့ plastic ဗူးခှံပျေါက chemical bond တှကေ ပကျြဆီးသှားနိုငျပွီး ရထေဲကို chemical တှပြေျောဝငျနှုနျး အရမျးမွငျ့မားလာနိုငျပါတယျ။
နပေူထဲမှာ အကွားကွီးထားထားတဲ့ ရနေဲ့ သသေခြောခြာ temperature control လုပျပွီး ထိနျးသိမျးထားတဲ့ ရနေဲ့ သောကျကွညျ့ရငျတောငျ အရသာပိုငျးမှာ အရမျးသိသာပါတယျ။ အဲ့တော့ အဲ့လို chemical တှေ ပြျောဝငျနတေဲ့ ရကေို သောကျမိရငျဘာဖွဈနိုငျလဲ?
၁ ဗူး ၂ ဗူးလောကျကို တျောတျောကွာကွာနမှေ တဈခါလောကျ သောကျမိတယျဆိုရငျတော့ ကွီးကွီးမားမား လကျငငျးပွဿနာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါပငျမဲ့ နစေ့ဉျသောကျနပွေီဆိုရငျတော့ chemical ပေါငျးမြားစှာရဲ့ side effect အနနေဲ့ ရငျသားကငျဆာ ကစပွီး အခွား ကငျဆာရောဂါမြားအပွငျ ဟျောမုနျးနဲ့ဆိုငျတဲ့ ရောဂါမြားဖွဈနိုငျခွရှေိတယျလို့ ပွောထားတဲ့ research တှလေဲရှိနပေါတယျ။ Research paper တှကေတော့ အမြိုးမြိုးပါပဲ။ အခြို့တှမှောလဲ ကနျြးမာရေးထိခိုကျစတေယျဆိုတာ အရမျးမသိသာဘူး၊ 100% မမှနျဘူး လို့ပွောကွပငျမဲ့ နပေူထဲထားထားတဲ့ရကေ အရသာ၊ အနံ့ သိသိသာသာပွောငျးနတောကတော့ ငွငျးလို့မရတဲ့ အခကျြပါ။
အနှဈခြုပျရမယျဆိုရငျတော့ ရသေနျ့ဗူးမှ မဟုတျပါဘူး၊ အခွား plastic ဗူးသုံးတဲ့ စားသောကျကုနျပစ်စညျးတှကေို သယျယူပို့ဆောငျရာမှာ ပိုပွီး စနဈတကလြုပျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ စားသုံးသူတှဖေကျကလဲ ကိုယျကနျြးမာရေးအတှကျ သိမျးဆညျးထားသိုတဲ့နရောတှမှော စနဈတကြ အပူခြိနျအလှနျမမြားတဲ့ အမိုးအကာအောကျနရောမြိုးမှာ သိမျးတာမြိုး၊ ကားပျေါမှာ အကွာကွီးထားထားတဲ့ရဗေူးတှကေို မသောကျမိအောငျ ဂရုစိုကျတာမြိုးလုပျသငျ့ပါတယျ။
Plastic ဗူးမြားက ထိနျးသိမျးပုံ စနဈမကရြငျ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစရေုံတငျမကပဲ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကိုရော ဘယျလိုပကျြဆီးစလေဲဆိုတာကတော့ နောကျ topic တဈခုအနနေဲ့ ပွောပွပေးသှားပါဦးမယျ။
Credit;Dr. Sai Aung Thant Zin
ဒီ ပြဿနာက မြန်မာမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး၊ ကမ္ဘာမှာလဲတော်တော် ဂယက်ထသွားစေတဲ့ ပြဿနာပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကျ ရေသန့်ဗူးတွေကို နေပူထဲမှာ ထားရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲ?
ကျွန်တော်တို့ သောက်နေတဲ့ ရေသန့်ဗူးတော်တော်များများက HDPE or PET နဲ့လုပ်ထားတဲ့ plastic ဗူးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Research တွေအရ အပူချိန် 20’C လောက်မှာဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ chemical တွေ ဗူး plastic ကနေ ရေထဲကို ပျော်ဝင်နိုင်မှု အချိန်အလွန်ကြာနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် နည်းပါးတဲ့အတွက် safe ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ဒါပင်မဲ့ အဲ့ထက်ပိုပြီး အပူချိန်များတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဥပမာ နေပူထဲ၊ နေပူထဲမှာ အချိန်အကြာကြီး ရပ်ထားတဲ့ ကားထဲ၊ အပူချိန်အရမ်းများတဲ့ အခန်း၊ ဂိုထောင် စတဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ အချိန်ကြာကြာထားမိပြီဆိုရင်တော့ အခြေအနေက တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အပူချိန်များလာတာနဲ့ အမျှ plastic ဗူးခွံ ပေါ်က molecular bond တွေက ပြိုကွဲနိုင်ခြေ ပိုမိုများပြားလာပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ chemical တွေက ဗူးထဲက အရည်ထဲကို ပျော်ဝင်နိုင်ဖို့ ရာခိုင်းနှုန်း ပိုပိုပြီးများလာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို အပူချိန် 36-40’C လောက်ထိ များတဲ့ဒေသမျိုးတွေဆို အဲ့အချက်ကို တော်တော်လေးဂရုစိုက်ရမှာပါ။ နေပူထဲရပ်ထားတဲ့ ကားတွေ၊ လေဝင်လေထွက်နဲ့ temperature control မရှိတဲ့ container နဲ့ ဂိုထောင်တွေမှာဆို အပူချိန်က 50-60’C လောက်ထိကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်တော့ plastic ဗူးခွံပေါ်က chemical bond တွေက ပျက်ဆီးသွားနိုင်ပြီး ရေထဲကို chemical တွေပျော်ဝင်နှုန်း အရမ်းမြင့်မားလာနိုင်ပါတယ်။
နေပူထဲမှာ အကြားကြီးထားထားတဲ့ ရေနဲ့ သေသေချာချာ temperature control လုပ်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ရေနဲ့ သောက်ကြည့်ရင်တောင် အရသာပိုင်းမှာ အရမ်းသိသာပါတယ်။ အဲ့တော့ အဲ့လို chemical တွေ ပျော်ဝင်နေတဲ့ ရေကို သောက်မိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ?
၁ ဗူး ၂ ဗူးလောက်ကို တော်တော်ကြာကြာနေမှ တစ်ခါလောက် သောက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ ကြီးကြီးမားမား လက်ငင်းပြဿနာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပင်မဲ့ နေ့စဉ်သောက်နေပြီဆိုရင်တော့ chemical ပေါင်းများစွာရဲ့ side effect အနေနဲ့ ရင်သားကင်ဆာ ကစပြီး အခြား ကင်ဆာရောဂါများအပြင် ဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ပြောထားတဲ့ research တွေလဲရှိနေပါတယ်။ Research paper တွေကတော့ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ အချို့တွေမှာလဲ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ အရမ်းမသိသာဘူး၊ 100% မမှန်ဘူး လို့ပြောကြပင်မဲ့ နေပူထဲထားထားတဲ့ရေက အရသာ၊ အနံ့ သိသိသာသာပြောင်းနေတာကတော့ ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်ပါ။
အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ရေသန့်ဗူးမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အခြား plastic ဗူးသုံးတဲ့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာမှာ ပိုပြီး စနစ်တကျလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စားသုံးသူတွေဖက်ကလဲ ကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် သိမ်းဆည်းထားသိုတဲ့နေရာတွေမှာ စနစ်တကျ အပူချိန်အလွန်မများတဲ့ အမိုးအကာအောက်နေရာမျိုးမှာ သိမ်းတာမျိုး၊ ကားပေါ်မှာ အကြာကြီးထားထားတဲ့ရေဗူးတွေကို မသောက်မိအောင် ဂရုစိုက်တာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။
Plastic ဗူးများက ထိန်းသိမ်းပုံ စနစ်မကျရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေရုံတင်မကပဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရော ဘယ်လိုပျက်ဆီးစေလဲဆိုတာကတော့ နောက် topic တစ်ခုအနေနဲ့ ပြောပြပေးသွားပါဦးမယ်။
သားဖွဈသူ ကို ဘှဲ့ရတဲ့ အထိ လကျတဈဖကျတညျးနဲ့ ရှာကြှေးပွုစုလာခဲ့တဲ့ ဖခငျ တဈဦး
စီးပှား တကျမညျ့ အိမျ